Banaadir Post | Voice Of Somalia | Page 2
Sheekh Cali Katiin oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay beelaha walalaha ah ee ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobalka Mudug iney joojiyaan dagaalada dhiiga micna darada ah ee iska daadinayaan’isagoona ugu baaqay beelahaas iney u midoobaan la dagaalanka shisheeyaha soo duulay.
Deegaano ka tirsan gobalka Mudug waxaa ku dagaalamaya beelo walala ah yadoona dagaal beeleedyadaasi dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tiro dad ah oo qeyb ka ah beelaha dagaalamaya.
GABAY:- Abwaan kaga hadlay geeridii Sheekh Muqtaar Abuu Zubayr.
Posted on November 20, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Abwaan Muuse Yuusuf waa mid kamid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa tiriyay gabay,Gabayga ayuu abwaanku kaga hadlay geeridii Sheekh Muqtaar Abuu Zubayr Amiirkii Shabaabul Mujaahidiin oo ku baxay gacanta Maraykanka laguna dilay daiyaadarahada Dronka.
DHAGEYSO:- Gaadiidleyda Shabeelaha Hoose oo ka cabanaya Isbaarooyin.
Posted on November 17, 2014 by Voice Of Somalia Standard
Isbaarooyin badan ayay maleeshiyaadka Dowladda soo dhigteen qeybo kamid ah shabeelaha Hoose.
Gaadiidlayda xamuulka ee ka shaqeeya Gobalka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in lacag malaayiin ah ay kaga baxdo isbaarooyinkaasi.
Darawal kaxeeya gaari uu leeyahay ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixiyay isbaarooyinka iyo lacagta looga qaado.
Dowladda ayaa ku celcelisay inay qaaday isbaarooyin yiilay shabeelaha hoose balse taasi waxay noqotay mid aanan sii shaqeyn oo isbaarooyinkii dib ayaa loo soo dhigtay.